Iindaba -HEBEI RUBANG CARBON IMVELISO YOKUGQIBELA, LTD iphuhlise itekhnoloji entsha yokulwa ne-antioxidant kunye nokufakwa kwi-oct.
Itekhnoloji yokwaleka kwe-antioxidant yokufaka i-graphite electrode, isetyenziswa kwii-electrode ze-graphite zombane wentsimbi yombane. yi-novolac epoxy, i-polyvinyl esemthethweni ye-acetal, i-phosphoric acid, i-silicon carbide, i-silicon-dioxide, iingoma ezifana ne-aluminium oxide, i-ferric oxide, i-boron nitride, i-norbide.be luhlobo lwesilayidi, olunokwenza ibrashi, ukutshiza, ukuthambisa okanye ukumitha indlela ukutyabeka okuphambili kumphezulu we-electrode ongaphantsi kwetrop ye-electrode, unamandla okubambelela makhulu, ukumelana ne-oxidation kunamandla, sebenzisa uncedo ngokulula, usebenzisa i-graphite electrode ukusetshenziswa ukunciphisa ngo-0.8-1.0kg kwitoni enye yentsimbi 7-8kg yoqobo nganye Ukucoca isiseko. 0933a emva kwenkqubo ye-graphite electrode ye-antioxidant inkqubo yetekhnoloji entsha yokutyabeka-ixesha elongeziweyo lokusetyenziswa kwe-graphite electrode 26 ~ 70.4%.
Kwinkqubo yokusebenzisa i-graphite electrode yombane we-arc xa uvelisa isinyithi, ngenxa yeqondo lobushushu eliphezulu le-oxidation, i-oxidation yecala le-electrode imalunga ne-60% yokusetyenziswa ngokupheleleyo. Grafayithi electrode Antioxidants e 600 ~ 1800 ℃ uluhlu, unako ukuthintela ukuqhagamshelana electrode nomoya ngqo ukunciphisa igcwala umphezulu grafayithi electrode nokwandisa ubomi electrode.
Iimveliso ezimiselweyo zinokusetyenziswa ngokudibeneyo neemveliso zokwaleka, kwaye i-anti-oxidation inokuphuculwa kakhulu. I-topcoating enganyangekiyo ye-oxidation phantsi kweemveliso zekhabhoni kwiqondo lobushushu eliphezulu, inokusebenza ukuba ifakwe kwii-graphite electrode ezisetyenziswa ngumbane we-arc eziko lesinyithi, ukudlala i-anti-oxidation yempembelelo yokukhusela i-graphite electrode yokuchasana nonyango.
UKUNCIPHA KOKUSETYENZISWA KOMBANE (%)
QAPHELA: Idatha ziziphumo zovavanyo lwe-anti-oxidation ye-graphite electrode ngomhla we-4 Septemba 2017 ukusuka kwiqela le-suzhou yentsimbi kunye nentsimbi.
Ukuhla kokusetyenziswa kwamandla kubalwa ngokweziphumo zovavanyo lwezixhobo zokusila zentsimbi.